[ စကားမစပ် ... စီဘောက်စ် Error တက်နေလို့ MESSAGE ဆိုပြီး Window အသစ်နဲ့ လုပ်ထားပါတယ်။ ပြောစရာရှိခဲ့ရင် အဲဒီ…
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ရယ်ဒီမိတ်မုန်းဟင်းခါး ချက်စားတယ်။ အရမ်းကောင်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါ၏ ဟိဟိ။ အခုထိ ဗိုက်ပြည့်နေတုန်းပဲ။ အုန်းနို့လေးပါ ထည့်ချက်လိုက်တော့ အနံ့လေးကောင်းသွားသလို တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အကြောမျာလည်း သိပ်မလှုပ်ရှားချင်တော့ :P
နောက်လဆန်းမှာ စာမေးပွဲနှစ်ခုရှိ၏။ တစ်ဘာသာကတော့ တော်တော်အုန်းကိုက်တယ်။ ဟိုဘက်လှည့်စဉ်းစားလိုက် ဒီဘက်လှည့်တွေးလိုက် လုပ်ရတဲ့ဘာသာ ... တစ်မျိုးမထင်နဲ့နော် Logic တွေပါတဲ့ဘာသာကို ပြောတာပါ :P လူတိုင်းညီးကြသည် ... ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့။ Core Module ဖြစ်နေတော့လည်း လုပ်ရပေမည်။ လာမည့် semester တွင် အုန်းကိုက်သော် ဘာသာများနှင့်တကွ Project လည်းလုပ်ရအုံးမယ် :( ဘယ့်နှယ့်မှကို မဘယ့်နှယ့်နိုင်ပါလား ... မောင်ဖိုးချမ်း ... ဟန် ... မင်းက ဒီကြားထဲ ဘလော့ကို ကလိနေသေးတယ် ... ။ တာ့တာဗျာ
နောက်နှစ် ဘယ်လိုအချိန် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ထပ်ပြီးကျအုံးမလဲတော့ မသိဘူးပေါ့။ အဲဒီအချိန်ကျရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုခုပြောင်းလဲနေမှာ သေ…
အခု အဲဒီဖောင်တော်ကြီးကတော့ မန်းလေး ကန်တော်ကြီးထဲကို ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဘာကြောင့် ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတောတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ အမြင်ချင်းကတော့ တော်တော်ကွာသွားပါတယ်။ ဆိုင်ကတော့ ကျုံးထဲမှာ ထားတုန်းကလောက်တော့ ရောင်းမကောင်းတော့ဘူးပေါ့။ ကန်တော်ကြီးထဲ ရောက်သွားတော့လဲ တစ်မျိုးတော့ လှနေတာပါပဲ။ မန်းလေးတောင်ကြီးကို မြင်ရတဲ့ရှူ့ခင်းကတော့ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ တစ်ခုကောင်းတာကတော့ ကန်တော်ကြီးဘက်က ဧရာဝတီမြစ်ဘက်နဲ့လည်းနီးတော့ လေကောင်းလေသန့်တွေ ရတာပေါ့။ လတ်ဆတ်တဲ့လေနုအေးလေးတွေ ရှူရှိုက်ရင်း ပြည်ကြီးမွန်ရဲ့လက်ရာတေ…
ဒါနဲ့ပဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မနက် ၁၀နာရီ မထိုးခင်လောက်မှာ ရောက်သွားတယ်။ ဒီ ဘုန်းကြီးကျောင်းကတော့ Manchester က ဘုန်းကြီးကျောင်းလို ဘုန်းကြီးကျောင်း သိပ်မပီသသေးဘူး။ အိမ်သဘောမျိုးပဲ ရှိသေးသည်။ မြေနေရာရှာပြီး လုပ်နေကြတယ်လို့တော့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုအံ့သြဖို့ကောင်းတာက စကျင်ဆင်းတုတော် အကြီးကြီးတစ်ဆူ ရှိသည်။ မန်းလေးကျွဲဆန်ကန်မှ Company တစ်ခုကနေ ပို့ပေးထားတာလို့ ဘုန်းဘုန်းပြောပြချက်အရ သိရသည်။ ဘုန်းဘုန်းနာမည်ကိုတော့ ဦးသီလို့ပဲ ခေါ်ကြသည်။ ဘွဲ့နာမည်က နည်းနည်းမှတ်ရခက်သည်။ ကျောင်းတွင် ကိုယ်တော်လေးပါး သတင်းသုံးနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဦးသီက ကျောင်းထိုင်တော့ မဟုတ်။ ကျွန်ေ…
တကယ်တမ်း စဉ်စားကြည့်တော့ ကျွန်တော် အဲဒီစကားကို မသိခဲ့ခင် အချိန်အထိ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုခဲ့တာတွေဟာ လောဘတွေပါလားဆိုတာ စဉ်ခြင်မိလာတယ် တစ်ခုခုလိုချင်လို့ ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တွေက တော်တော်များနေတယ်။ အခုကိစ္စမှာလည်း ကျ…
ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ စကားအရ ဒီနေ့ ဘလော့တွေထဲကို လျောက်သွားပြီးမွှေလိုက်တာ Smiley ထည့်တာလေး ရလိုက်တယ် :) တော်တော်ပျော်သွားတယ်။ ဒီတိုင်းကြီးစာရေးပြီး ဘလော့ရတာလည်း ပျင်းလာပြီ။ smiley လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ဖတ်ရတာလည်း ကောင်းတာပေါ့နော့ ;) ဘယ်မှာယူ ဘာတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ notes4pc မှာ တင်ထားပါတယ်။ အဲ ... ကျွန်တော့်ရဲ့ နောင် ရေးမည့် ပို့စ်တွေကတော့ မျက်စိနည်းနည်း နောက်လိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာ :P
ဒီနေ့ အိပ်ရာက နိုး ဘလော့ကို ကြည့်လိုက်တော့ cbox မှာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး လာအော်ထားတာတွေ့တယ်။ အရမ်းပျော်သွားတယ်ဗျာ :) နောက်ကိုလည်း အမြဲလာပြီး ပြောပါအုံးလို့ တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ တစ်ချို့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ ငယ်ပေါင်း တွေလည်းပါတော့ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို ချစ်လို့ ခင်လို့ ပြောထားတဲ့ စကားလေးတွေတော့ ရှိတယ်ဗျ :P
Update : 14/01/07
Smile လေးတွေ OldBlogger အတွက်ရော BetaBlogger အတွက်ပါ အိုကေသွားပါပြီ
Assignment တစ်ခု ... DeadLine က မနေ့ကည ၁၂နာ၇ီမတိုင်ခင်။ ဒါပေမဲ့ တင်တော့ အခုမနက် သုံးနာရီလောက်မှ တင်ပြီးသွားတယ်။ တောစောင့်နတ် တောင်စောင့်နတ် ကျောင်းစောင့်နတ်တွေ မစလို့ တော်သေးတယ် Supervisor ဆီက OK ဆိုတဲ့ Mail လေးရောက်လာတယ်။ ရင်ထဲမှာ ဘာတွေစုနေမှန်းမသိတဲ့ အလုံးကြီး ကျသွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညံ့လှပြီမှတ်နေတာ ကိုယ့်ထက်ပိုဆိုးတဲ့သူနဲ့တွေ့နေတယ်။ သူတို့ကိုလုပ်ပေးနေရတာနဲ့ နောက်မကျသင့်ပဲ နောက်ကျသွားတယ်။ တော်သေးတယ် OK ဆိုတဲ့ မေးလ်ကို မြင်လိုက်ရတာ တော်တော် စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။ အခု ဆက်လဲ မအိပ်ချင်တော့တာနဲ့ လျောက်သွားနေတယ် (အင်တာနက်ထဲမှာ)။ နေ့လည်ကျရင်လည်း ကျောင်းသွားပြီး Assignment တစ်ခု ထပ်ပြီး တင်ရဦးမယ် ... ဟူ ဟူး ကျောင်းသားနဲ့ Assig: က သူကအပေါ်ရောက်လိုက် ကိုယ်က အပေါ်ရောက်လိုက်ပဲ :P ပြီးသွားလို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားမှုကတော့ မိုက်တယ် တစ်မျိုးလေးပဲ ဟာဟ။ ဒီနေ့ထူးဆန်းတာ သူငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာ assign လုပ်ဖို့ မနေ့ညကတည်းက လိုက်လာခဲ့တာပဲ။ ခုထိတော့ မအိပ်ရသေးဘူး။ ဒါ လန်ဒန်မှာ ပထမဆုံး သူများအိမ်မှာ ညည့်နက်အောင်နေတာပေါ့ :P မန်းလေးမှာ တုန်းကတော့ မဆန်းပါ။ ညပိုင်းနဲ့ မနက်စောစော ဖိုးချမ်းကို ရှာချင်လား MCC ကိ…
မန်းလေးမှာ ရှိတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မျက်စိထဲမှာ အေးသွားတာပဲဗျာ။ မန်းလေးသူ/သား တော်တော် များများကတော့ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ ဘယ်နေရာလဲ ခန့်မှန်းကြည့်ကြပါအုံး ?
၂၄ ရက်နေ့က မသွားဖြစ်လိုက်ဘဲ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာပဲ ညအိပ်ပြီး မနက်ပိုင်း အေးအေးဆေးဆေးမှ လန်ဒန်ကနေ စထွက်လာခဲ့တယ်။ ၁၀ နာရီလောက်ကနေစပြီး ထွက်လာတာ Manchester နားလေးက Doncaster ဆိုတဲ့မြို့လေးကို နေ့လည် ၁နာရီလောက်မှာရောက်သွားတယ်။ ခရစ်စမတ်နေ့ဆိုတော့ လမ်းမှာယာဉ်ကြောရှုပ်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာ ပြောသေလောက်တော့ မရှုပ်ဘဲ ခဏလေးနဲ့ပဲရောက်သွားတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ဗမာအသိတစ်ယောက်အိမ်မှာပဲ တည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ အိမ်ရှင်တွေက တော်တော်သဘောကောင်းပြီး ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိပါတယ်။ ရောက်တဲ့ညမှာပဲ မုန့်ဟင်းခါးချက်ကြတယ်။ နောက်နေ့မနက်မှာ မန်ချက်စတာက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အာရုံဆွမ်းကပ်ရန်အတွက် လုပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်း၍လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ အကြော်ကြော်တဲ့တာဝန်ကို ယူခဲ့သည်။ မုန့်ဟင်းခါးအတွက် ပဲကြော်ကြော်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မနက် ၃ နာရီလောက်မှ အိပ်ဖြစ်သွားပြီး မနက်လေးနာရီလောက်မှာ ပြန်ထ၍ လိုအပ်သည့်အရာများ ကားပေါ်သို့တင်ဆောင်ကာ မန်ချက်စတာသို့ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ တစ်နာရီခွဲလောက်ကြာပြီးနောက် အင်္ဂလန်တွင် အကြီးဆုံးနှင့် အသပ်ရပ်ဆုံး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ရှိရာ မန်ချက်စတာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျောင်းတွင် ဆယ်ရက်တရားစခန်းဝင်နေသော ရောဂီမ…